Neymar Jr Oo Ganaax Culus Kala Kulmay Maamulka Kooxdiisa PSG Iyo Xaalada Oo Faraha Ka Baxday. - Gool24.Net
Neymar Jr Oo Ganaax Culus Kala Kulmay Maamulka Kooxdiisa PSG Iyo Xaalada Oo Faraha Ka Baxday.
Maamulka kooxda PSG ayaa kaga dhabeeyay balantii ay ku qaadeen in ay talaabo ku haboon ka qaadanayaan xidiga kooxdooda ee Neymar Jr kaas oo ka soo xaadiri waayay tababarkii ugu horeeyay ee kooxdiisa ugu soo laabtay diyaar garowga xili ciyaareedka cusub.
Neymar jr ayaa ganaax culus kala kulmay maamulka kooxdiisa PSG ee ka cadhaysan in uu ka maqnaaday waqtigii laga doonayay in uu xarunta tababarka ka soo xaadiro waxayna taasi keeni kartaa in khilaafka labada dhinac uu gaadho heer aan la daawayn karin.
Warbaahinta dalka Brazil ee UOL Esporte ayaa lagu shaaciyay in kooxda PSG ay ganaax lacageed oo culus dul dhigtay xidiga dalkooda ee Neymar Jr kadib markii uu seegay waqtigii uu tababarka ku soo laaban lahaa.
Sida warka UOL Esporte lagu cadeeyay, maamulka kooxda PSG ayaa Neymar Jr ku soo rogay ganaax lacageed oo gaadhaya €375,000 yuro waxaana ganaaxa ciqaab looga dhigay Neymar Jr oo amar la’aan kaga maqnaaday tababarka kooxdiisa PSG.
Aabaha dhalay Neymar Jr oo la hadlay Fox Sports ayaa sheegay in ay aad uga cadhaysan yihiin war saxaafadeedkii ay shalay PSG ka soo saartay maqnaanshihii Neymar Jr laakiin iyada oo ganaaxani uu markale soo baxay ayaa la filayaa in ay xaaladu faraha ka sii bixi doonto.
Neymar Jr aabihii ayaa cadeeyay in sababta ay isaga iyo wiilkiisu Brazil u joogaan tahay mid ganacsi oo ay horeba madaxda PSG uga soo qayb gashay wuxuuna cadeeyay in aanu fahmi karin sababta ay PSG war saxaafadeed u saartay.
Laakiin iyada oo hadda Neymar jr gadhka loo galiyay ganaax lacageed oo €375,000 kun oo yuro ah waxay muujinaysaa kala fogaanshaha Neymar Jr iyo qoyskiisa ee xaalada kooxda PSG.
Neymar Jr ayaa maamulka kooxda PSG, ciyaartoyda ay isku kooxda yihiin iyo waliba wakiiladiisa waxa uu ku wargaliyay in uu xagaagan ka baxayo PSG iyada oo ay wararku sheegeen in bishii May uu kooxdiisa PSG u sheegay in aanu Paris ku soo laabanayn.
Si kastaba ha ahaatee, Neymar Jr ayaa maalmaha soo socda ku sii sugnaan doono dalkiisa Brazil sida uu aabihii xaqiijiyay iyada oo kadib la arki doono waxa xiga ee ay samayn doonaan.